चिर्नै पर्छ प्रचण्ड राष्ट्रघातको आरोपलाई
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको गठबन्धन टुटाएर नेपाली कांग्रेससँगको नयाँ गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा साथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रघातमा लागेको कटाक्षे सामाजिक संजालहरुमा प्रशस्तै देखिएको थियो । नेपाली जनताको राष्ट्रियताको भावनालाई राम्रैसँग बुझेर महाकालीको पाप पखाल्ने प्रयत्नमा लागेका केपी ओली निकै प्रतिकुलतामा पनि हाइ–हाइबाट विदा लिन सफल भए । अ‍ोली र प्रचण्डका भित्रि कुरा के के थिए र किन लागु भएनन् वा सतहमा ल्याइएका कुराले प्रचण्डलाई गठबन्धन टुटाउन कसरी बाध्य बनायो ? विश्लेषण आ–आफ्नै पाराले गर्न सकिन्छ । तर, एमालेका नेताहरु मुख्यत झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएको तर पालना नगरिएको खुलासा भएकोले पनि प्रचण्डले सरकार निर्माणका लागि कांग्रेसको सहयोग लिएका हुन भन्न चाँहि प्रष्ट सकिन्छ ।
वाम गठबन्धनको डोरी चुडालेर दक्षिणपंथी शक्तिसँग नयाँ सहयात्रा गरेका प्रचण्डको अगाडि चुनौतीका चाङहरु निकै रहेको अब दोहो¥याइरहनु पर्दैन । तथापी भारतले नाकाबन्दीका बेला अ‍ोलीले देखाएको अडान, बजेटमा सुधारात्मक प्रतिस्प्रधाको प्रयास, दक्षिणपन्थी शक्तिसँगको असहज यात्राको थालनी र चुलिदैं गएको जनआकांक्षाका बिच कमरेड प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको कुरा पनि चुनौती सँग जोडिएका छन् ।
यतिबेला कमरेड प्रचण्ड सबैभन्दा ठूलो चुनौती गणतन्त्र संस्थागत गर्नुमै छ । “ठेला–गाडा घचेटेर अमेरिका पुगिन्न, कुहिनाले पहरा फोर्न कहाँ सक्छ ?” भन्ने लाइनका मुख्य नेता शसक्त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ र आत्मैदेखि व्यवस्था परीवर्तन नचाहेको नेपाली कांग्रेस जस्तो यथास्थितिवादी शक्तिको मुख्य आडमा सरकार चलाउनु परेको छ । त्यसैगरी उग्र अराजकतामा फसेको मधेस आन्दोलनका नेताहरुलाई मुलधारमा ल्याउन कम्ति सहज छैन ।
प्रचण्डलाई यि सबै चुनौती पार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा प्रसस्तै थियो र अरु थप घेराबन्दी सहन गर्ने आँट भएरै काँग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा गरेका हुन भन्न पनि सजिलै सकिन्छ । रुझेका विरालो जस्तै रत्नपार्कमा म्याउ म्याउ गर्ने दलहरुलाई शक्तिका साथ एकै ठाउँमा ल्याइदिएको प्रचण्ड र उनको टिमले नै हो । यो विषयसँग जोडिएका घटनाक्रममा मत बाझिन सक्छ तर पछिल्लो परिवर्तनको मूलधारको नेतृत्व गर्ने मुख्य नायक प्रचण्ड नै हुन भन्ने कुरामा कांग्रेसीजनले पनि सहमत नहुने ठाउँ छैन । तर्सथ परीवर्तनको मुख्य हकदारलाई सत्ताको नेतृत्व दिन न कांग्रेसले कन्ज्युस्यांइ गर्नुप¥यो न त भोली एमालेले नै गर्ला ?
नियमित चुनौती सबैका हुन्छन् । तर प्रचण्डका अगाडी भयंकर र खतरनाक राष्ट्रघातका फाइलहरु अगाडि बढाउन खोजिएको छ । फास्टट्रयाक जस्तो नेपाली आफै बनाउन सक्ने परीयोजना, नौ मुरेको प्रसंग, प्रहरी प्रतिष्ठानको लागि भारतीय सहयोग लगायतका प्रस्ताव नेपाल र नेपालीका लागि निकै जिज्ञासाका विषय भएका छन् । राम्रो व्यवस्थापन गर्ने आँट सरकराले गर्ने हो र लगानीको आव्हान गर्ने हो भने खरबौंको रकम सजिलै जुट्छ भन्ने करा अहिले शेयर बजारले प्रष्ट पारेको छ । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी भारत गएलगत्तै प्रचण्डले राष्ट्रघात गरिसकेको हल्ला बेजोडले पिटीएको थियो । नेकपा एमालेको स्थायी समितिबाटै प्रचण्डले मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्ने चुनौती आइसकेको थियो । प्रचण्ड स्वयमले राजनीतिक र संवैधानिक कुरा पत्रमा कतै नलेखिएको भन्दा पनि जनता विश्वस्त भै हाल्न सकेको स्थिति छैन ।
दुवै छिमकको माया लिन सक्ने सद्भावि कुटनीति निर्माणको पहलमा क. प्रचण्डका प्रयत्न कति अव्वल होला ! त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उनको पछिल्लो प्रयासलाई सराहनीय मान्नैपर्छ । भारतले सत्तामा पु¥याएको आरोप व्यहोर्नु पर्ने गरी सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्डले राष्ट्र र राष्ट्रियताको संवेदनशीलता गहिरोसँग बुझेका छन् । भनेर विश्वास गर्ने ठाउँहरु उनले अझै राखेका छन् । स्यालहुइया चलिरहन्छ त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ तर देशलाई वर्वाद पार्ने परियोजनामा प्रचण्डले मिठाइ टोक्नै हुदैन र चुक्नु हुँदैन । जनताले उनलाई अझै माया, विश्वास र अपेक्षा गरीरहेको कुरालाई गम्भीर भएर मनन गर्नैपर्छ ।